नयाँ वर्षबाट किसानका लागि मेरो कित्ता कार्यक्रमको सुरुवात – Krishakkhabar
Thursday, April 15th, 2021 | krishak khabar
काठमाडौ २ बैशाख
नयाँ वर्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो कित्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । किसानका लागी नयाँ वर्षको शुरुबाटै मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुने उनले बताए।
किसानले आफ्ना पूर्जा घरबाटै एपमार्फत हेर्नसक्ने र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उक्त काम गरेको जानकारी दिए । नयाँ उत्साह, नयाँ आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेको बताउदै थालेका अपूरा कामलाई पूरा गर्ने र देशलाई विकासको चरणमा पु¥याउने संकल्प समेत गरे ।
मेरोकित्ता के हो ?
मेरो कित्ता सुरु भएसँगै घर, भवन निर्माण वा खरिदबिक्री प्रयोजनका लागि अब जग्गाधनीले नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनु नपर्ने भएको छ । सुरुमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका अति व्यस्त नापी कार्यालयहरूबाट मात्रै उपलब्ध हुनेछ । यसपछि देशभरका १ सय २६ वटा कार्यालयबाट पनि अनलाइन प्रणाली सुरु हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिए ।
TOTAL PAGE VIEWS: 775220